Imininingwane yokulethwa - HHO FACTORY, Ltd
Imininingwane yakamuva yokulethwa kwe-COVID-19, i-UPS
Ikhasimende Okokuqala, Abantu Led, Innovation Driven
Indaba ye-UPS, inkampani enkulu kunazo zonke yokulethwa kwamaphakeji, yaqala ngaphezu kwekhulu leminyaka edlule ngemalimboleko engu- $ 100 yokuqalisa insizakalo encane yezithunywa. Ukuthi siguquke kanjani saba yinkampani yomhlaba wonke eyizigidigidi zamarandi kukhombisa umlando wezokuthutha zanamuhla, ezentengiselwano zamazwe omhlaba, ezokuhanjiswa kwempahla kanye nezinsizakalo zezezimali. Namuhla, i-UPS ikhasimende kuqala, ukuholwa kwabantu, ukuqalwa okusha. Inikwe amandla ngabasebenzi abangaphezu kuka-495,000 abaxhumanisa izizwe nezindawo ezingaphezu kwezingu-220 ezinqamula imigwaqo, ujantshi, umoya nolwandle. Kusasa, i-UPS izoqhubeka nokuhola imboni futhi ixhume umhlaba, ngokuzibophezela ekusetshenzisweni kwekhwalithi kanye nokusimama kwemvelo.
Landelela ukuthunyelwa kwakho: http://www.ups.com
I-POST Express iyisevisi yomhlaba wonke yokuposa enezinsizakalo zokulethwa kwezidingo eYurophu nakwezinye izingxenye zomhlaba. Isikhathi sokuhamba siyizinsuku eziyi-8 zomsebenzi.
Yiziphi izindawo zomhlaba wonke i-An Post ethumela kuzo imeyili?
Lolu uhlu lwamanje lwamazwe esithumela kuwo imeyili. Lolu hlu lungashintsha kepha sizolibuyekeza njalo ukuze uphinde uhlole lapha ukuthola imininingwane yakamuva.
Siphinde safaka imininingwane eyengeziwe kunoma yimiphi imikhawulo yamanje kulawa mazwe engasiza ekuyazini ngaphambi kokuthi uthumele.
Albania Ayikho imikhawulo
Austria Ayikho imikhawulo
Bahrain Ayikho imikhawulo
Belarus Ayikho imikhawulo
Belgium Ukubambezeleka kwangaphakathi
Bulgaria Ukubambezeleka kwangaphakathi
Canada Ayikho imikhawulo
Islands Channel Ayikho imikhawulo
China Ayikho imikhawulo
Croatia Ayikho imikhawulo
Cyprus Ayikho imikhawulo
I-Czech Republic Ayikho imikhawulo
Denmark Ayikho imikhawulo
Estonia Ayikho imikhawulo
Finland Ayikho imikhawulo
France Ayikho imikhawulo
Germany Ayikho imikhawulo
Ghana Ayikho imikhawulo
Greece Ayikho imikhawulo
Hungary Ayikho imikhawulo
i-Hong Kong Ayikho imikhawulo
Iceland Ayikho imikhawulo
India Ayikho imikhawulo
Israel Ayikho imikhawulo
Italy Ayikho imikhawulo
Jersey Ayikho imikhawulo
Kenya Ayikho imikhawulo
Latvia Ayikho imikhawulo
Lithuania Ukubambezeleka kwangaphakathi
Luxembourg Ukubambezeleka kwangaphakathi
Malawi Akukho ukuvinjelwa
Malaysia Ayikho imikhawulo
Malta Ayikho imikhawulo
Netherlands Ayikho imikhawulo
Nigeria Ayikho imikhawulo
Norway Ayikho imikhawulo
Poland Ayikho imikhawulo
Portugal Ayikho imikhawulo
Qatar Ayikho imikhawulo
Romania Ayikho imikhawulo
Inhlangano yase Russia Ayikho imikhawulo
I-Saudi Arabia Ayikho imikhawulo
Serbia Ayikho imikhawulo
Slovakia Ayikho imikhawulo
Slovenia Ayikho imikhawulo
Iningizimu Afrika Ayikho imikhawulo
INingizimu Korea Ayikho imikhawulo
Spain Ukubambezeleka kwangaphakathi
Sweden Ayikho imikhawulo
Switzerland Ukubambezeleka kwangaphakathi
Taiwan Ayikho imikhawulo
Tanzania Ayikho imikhawulo
Thailand Ayikho imikhawulo
igalikuni Ayikho imikhawulo
UAE Ayikho imikhawulo
Ukraine Ayikho imikhawulo
i-United Kingdom Ayikho imikhawulo
USA Ayikho imikhawulo
Zambia Ayikho imikhawulo
Zimbabwe Ayikho imikhawulo
Imininingwane yokuthumela i-Irish An Post Service, i-UPS
Lapho konke kwenziwa amaphakheji athunyelwa ngosuku olufanayo (inani elikhulu le-Ship 10 izinsuku (izinsuku) ngemuva kokutholwa kwenkokhelo yokuqala) yokwamukelwa kokukhokha futhi ithunyelwa nge-UPS ngenombolo yokulandelela nokulahla umnyango nomnyango ngesiginesha. Imali yokuthumela ifaka phakathi imali yokuphatha nokupakisha kanye nezindleko zokuposa. Imali yokuphatha ihleliwe, kanti imali yokuhamba iyehluka ngokwesisindo esiphelele nendawo lapho kuthunyelwa khona. Amabhokisi akhulu ngokwanele futhi izinto zakho zivikelwe kahle.
Uzothola i-imeyili enenombolo yokulandelela yephakheji yakho ngosuku olufanayo lokuthumela.
Imali ekhokhwayo yokuthumela isuselwa kusisindo somkhiqizo. Emikhiqizweni eminingi eyaliwe, uhlelo lwesitolo lunezela isisindo sawo wonke amayunithi a-oda futhi likhokhisa imali eyodwa yokulethwa. Ngakho-ke, ikhasimende eliyalela imikhiqizo emithathu enesisindo esingama-200gms, 250gms kanye ne-400gms likhokhiswa imali eyodwa yokulethwa yemithwalo enesisindo esingaphezu kwama-500gms kodwa engaphansi kwekhilogremu elilodwa. Ikhasimende alikhokhiswa imithwalo emithathu ehlukene enesisindo esingaphansi kwama-500gms lilinye.
IQINISO LABO, Ltd ifake imishini ehlukahlukene yokuhlola ukuze zonke izinyathelo zokukhiqizwa zifakwe ngezikhathi zokuhlola ikhwalithi. Imikhiqizo yethu ihlolwe ngamapharamitha ahlukile ngaphambi kokuthi ihlinzekwe emakethe.
LESI SIZO SEBENZELWA UMA UMkhiqizo UVULIWE, WAQHUNYWA NOMA UQHAWULILE
Inani le-hydrogen elikhiqizwe ngesidingo lincane kodwa sicela uqaphele okulandelayo:
Isexwayiso! I-Hydrogen igesi evuthayo futhi ingakha izingxube eziqhumayo nge-oxygen noma umoya. Igesi le-Hydrogen ibeka umlilo ngokushesha kanye nobungozi bokuqhuma lapho ukugxila kudlula u-4%. Ikhanya kakhulu kunomoya futhi isha ngelangabi elingabonakali. Ngaphambi kokusebenza kohlelo lwe-HHO olufakiwe qinisekisa ukucisha yonke imithombo yokushisa, ukushisa okunqunu kufaka phakathi izinhlansi noma amalangabi kunqamula amatheminali ebhethri yemoto futhi uthathe izinyathelo zokuqeda ugesi omile. Akukho ukubhema eduze nejeneretha noma amadamu alo nganoma yisiphi isikhathi. Ama-generator e-HHO akhiqiza amagesi e-HHO ngokufunwa lapho injini isebenza kodwa uma inqanyulwa kuzoba nenani eliyinsalela lamagesi e-HHO emadamini nasezihubhu. Vumela amayunithi ukuthi akhiphe kahle ngaphandle noma endaweni enomoya omuhle ngaphambi kokusebenza kumayunithi noma izesekeli.
Abathengi kufanele bafunde zonke izexwayiso, imiyalo ngokusetshenziswa okuphephile, amalebula, izitatimende zokuzikhulula, nazo zonke ezinye izinto ezifakiwe nemikhiqizo ethengiwe kule webhusayithi ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo onjalo. Ama-Hydrogen Generator athengiswa ngokuqonda ukuthi umthengi ufundisisa futhi anamathele ku-PRECAUTIONS AND WARNINGS of SAFETY echazwe ekufakweni ukuze kugwemeke ubungozi. I-HHO IQINISO, i-LTD ayemukeli isikweletu somonakalo noma ukulimala noma ngokulahleka okuqondile noma okubangelwa ukusetshenziswa okungalungile, ukuguqulwa kwamayunithi noma ukugcinwa kwama-HHO-generators noma izesekeli.
Thintana neQembu lethu Lokunakekela Amakhasimende elizokunikeza inombolo ebuyayo. Uzodinga ukuphrinta lokhu ngaphandle kwephakeji yokubuyisa.
Sicela unakekele ukufaka izinto (izinto) ngokucophelela; izimpahla kumele zifike zisesimweni esingasetshenziswanga ukuze imali ikhishwe. Uma ubuyisela izimpahla esezisetshenzisiwe, ngeke sikwazi ukubuyisa imali, (akukho mapakethe evulekile oqobo, izinzwa zikagesi, sicela).
IQINISO LABO, LTD ayimbozi izindleko zokubuyiswa kwemali. Kodwa-ke, sincoma ukuthi usebenzise izinsizakalo zokuposa eziphakanyisiwe eziboniswe kuethebula elingezansi kuye ngokuthi ulibuyisela kuliphi izwe iphakethe.
Uma unemibuzo noma udinga usizo, sicela uxhumane nethimba lethu lenkonzo yamakhasimende, futhi bayokujabulela ukusiza. Uma ukubuyisa kwakho sekutholakele futhi kuhlolwe isikhungo sokugcwaliseka (okuvamisile kungakapheli izinsuku eziyi-10 - 20 ukutholile), sizosebenzela ukusheshisa ukubuyiselwa kwemali kwakho ngokushesha okukhulu; lokhu kungathatha kufika ezinsukwini eziyi-7 ngokuya ngendlela yakho yangempela yokukhokha. IQINISO LABO, LTD izobuyisa inani eliphelele lokuthenga lezinto ezibuyisiwe ngaphandle kokuposa.
Ibuyisa zingakapheli izinsuku eziyi-14: IQINISO LABO, LTD izophinda ibuyisele inani lentengo lomkhiqizo wentengo (yezinto) ebuyiselwe ngaphandle kokuthumela, imali yokuthenga imali, idiphozi, insizakalo yokuhlanza i-injini yekhabhoni, nezimali zokuhamba. Imali engu-30% yokuphatha izobala ukukhanselwa kwamakhasimende, futhi imali yokuposa ngeke ibuyiselwe emuva. (Futhi, ukubuyisa kufanele kungasetshenziswanga, kwisimo ositholile, nakokuphakeji kwasekuqaleni)
Buyisela Izinketho Zokuthumela
Izinto ezi-fakwe ngokungeyikho zizokwamukelwa kungakapheli izinsuku eziyi-14 selokhu kwenziwa inkokhelo yento ethile, futhi sikhokhisa imali engu-30% yokuphatha futhi imali yokuposa ngeke ibuyiselwe izinto ezi-odwa ngendlela engafanele.
Sincoma ukuthunyelwa ngendlela efaka ukulandela ngomkhondo nomshuwalense wokuthumela kwakho.]
Konke ukuthunyelwa kufanele kwenziwe kukhokhwe kuqala; amaphakheji athunyelwe e-COD azokwenqatshwa kufaka phakathi i-DPD engamukeleki, izithunywa ze-GLS njengenkonzo yokulethwa komuntu wesithathu.
Noma yiliphi iphakheji elenqatshiwe, iphakheji ye-Undelivered, noma elahliwe izokhokhiswa ngokuzenzekelayo ngamakhasimende ngemali ekhokhwayo.
AKEKHO UMGAQO WOKUGCINA OQHAWULEKILE nokubuyiselwa kwemali
Nayi inqubo yethu yokubuyiselwa ngaphandle kokuhlupheka: Xhumana nathi; Lindela impendulo yethu ngaphakathi kwezinsuku zebhizinisi eziyi-1-3; ... Asinikezi ukubuyiselwa kwemali okugcwele (ngaphandle kwemali yokuthumela) izinto ezilandelayo: Izinto esezisetshenzisiwe noma ezilimele; Izinto ezinesephulelo noma ezithengiswayo.
Uma sesitholile into yakho, sizohlola umkhiqizo futhi sikwazise ukuthi siyitholile into yakho ebuyiselwe. Sizokwazisa ngokushesha ngesimo sembuyiselo yakho ngemuva kokuhlola into.
Uma imbuyiselo yakho ivunyiwe, sizokwakha imbuyiselo ekhadini lakho lesikweletu (noma indlela yasekuqaleni yokukhokha).
Isikhathi sezikhathi lapho uzothola khona isikweletu sizoba ngokuya ngezinqubomgomo zikhipha ikhadi lakho.
I-HHO IQINISO, i-LTD ingashintsha inqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Zonke izinguquko zizothinteka kuleli khasi. Uma unemibuzo mayelana nale nqubomgomo noma isiza sethu sisonke, sicela uxhumane nathi.